Global Voices teny Malagasy » Hong Kong: ‘Raha Afaka Mampirafy Ny Lehilahy? Nahoana Kosa Ny Vehivavy No Tsia ?’ · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Novambra 2013 12:55 GMT 1	 · Mpanoratra inmediahk.net Nandika nirinandrea
Sokajy: Azia Atsinanana, Hong Kong (Shina), Mediam-bahoaka, Teknolojia, Vehivavy sy Miralenta
Nanokatra ny vohikalany natao ho an'ny ao Hong Kong ny Ashley Madison, vohikala iray fampihaonan'olon-droa ao Etazonia, izay mandrisika ny fijangajangana. Vehivavy no mpampiasa aterineto tena kendren'izy ireo ary misy fepetra fiarovana ahafahana mifandray manokana ihany koa ao, misy amin'ireo antokom-pivavahana sy fikambanana ara-sosialy fatra-pifikitra amin'ny nentin-drazana no manakiana ilay sehatra.
Mba hiatrehana ny olana ara-moraly avy amin'ny fomba fijerim-behivavy sy mpandala ny maha-vehivavy, dia nanadihadian'i N Chan, mpanao gazety mpanangom-baovao ho an'ny median'olon-tsotra inmediahk.net i Miss T, ilay “mpitady fijangajangàna (Fanamarihana: “te-hiodina” hoy ny Malagasy)” , sy mpandala ny maha-vehivavy ao an-toerana Lee Wai Yee, mikasika ny kolontsain'ny resaka firaisana ara-nofo ao Hong Kong. Tamin'ny teny Sinoa no namoahana  ilay lahatsoratra voalohany ny 29 Oktobra 2013. Ity nafohezina amin'ny teny Anglisy ity kosa dia nadikan'i Loh Yuen Ching ary naverin'ny Global Voices navoaka araky ny fifanarahana fifampizarana rakitra.
Sary avy ao amin'ny vohikala Ashley Madison ao Hong Kong.
Lasa lohahevitra vaovao mafana dia mafana ao Hong Kong tato ho ato ny resaka fijangajangana hatramin'izay nisokafan'ilay vohikala fampihaonana olon-droa Ashley Madison  izay. Misy ireo nanakiana ilay vohikala noho ny famporisihany ny olona ho amin'ny fijangajangana, ao koa ireo nanamarika fa miha-mitombo hatrany ireo vehivavy mitady raharaha (te-hiodina) ao, izay ho lasa mpampiasa mavitrika io sehatra io.
Efa nisy hatrizay ny seha-pifandraisana anatiny sy ny sehatra fitadiavana olona hiarahana tao Hong Kong, ary tsy tokony hatao resabe toy izany ny fisokafan'ilay vohikala Ashley Madison. Tsy mitombina mihitsy raha ny fisokafanà vohikalam-pifandraisana iray vaovao no hampiakatra ny faniriana ara-nofon'ny vehivavy tampotampoka eo. Na izany aza, rakotra fisavoritahana ara-moraly be dia be ny fanehoan-kevitr'ireo haino aman-jery mahazatra mikasika io vohikala vaovao io. Inona no tena mampitahotra amin'ny faniriana ara-nofon'ny vehivavy ? Nanontaniako i Ms T, mpitady olona hiarahana tao, ary i Lee Wai Yee, ilay mpandala nymaha-vehivavy sady mpahay momba ny resaka firaisana, raha toa ka afaka ny hanome fahalalahana ho an'ny vehivavy sy hamela azy ireo haneho ny faniriany ny aterneto.
Efa manana fiarahana milamina tsara i Ms T, kanefa mbola mikatsaka hatrany olona samihafa ho amin'ny resaka firaisana ara-nofo. Nilaza izy fa maro be ny vohikalan'olon-dehibe ao Hong Kong izay mamatsy tolotra ho an'ireo izay “te-hiodina”. Maro amin'ireo vehivavy no milaza mibaribary ny fitadiavan'izy ireo olona hiarahana amin'n resaka firaisana ara-nofo fotsiny any amin'ireo sehatra natokana ho an'ny olon-dehibe Hong Kong Forum  sy ao amin'ny Uwants. Misy amin'ireo sehatra sasany aza dia natokana ho amin'izany mihitsy, toy ny Adult Friend Finder . Ary azon'ireo olona tena saro-kenatra atao koa ny mampiasa tsara ireo efitra firesahana manokana sy ny “applications” anaty finday.
Raha te-hiodina ianao, tsotra toy ny fikitihana ny smartphone anao izany- “Shake” (na kitio) dia ilay “application” anaty finday, tolotra fandefasana hafatra an-tsoratra na feo an'i Wechat  izay mampifandray anao aminà mpampiasa hafa, izay manodidina ny 100 metatra. Natao hitadiavana namana sy olon-tiana moa io sehatra iray io.
Hoy i Ms T : “Na dia eo aza ny tsy fitovian'ny lahy sy vavy, efa miha mivelatra tokoa ny fitadiavana olona hiarahana ety anaty aterneto.” Tao amin'ireny sehatra natao ho an'olon-dehibe sy vohikala fitadiavana namana ireny no nahitany ny olona nilainy amin'ny resaka firaisana ara-nofo, ary notsindriny tsara fa tsy misy resaka vola na tombontsoa manokana ao anatin'izany fiarahana izany. Fa resaka firaisana ara-nofo fotsiny izao. Tsy afaka mahazo fahafaham-po avy amin'ny vadiny intsony izy ka voatery nitady tany an-kafa : “dimy taona no nivadianay. Marina fa nanàna ny faniriany izy, kanefa tsy mba nanontany ahy izy fa nisafidy ny hitady olon-kafa ivelan'ny tokantranonay. Fantatro fa betsaka ny lehilahy no manao toy izany, kanefa manana ny filàko ara-nofo ihany koa aho. Nangataka hiray taminy mihitsy aza aho kanefa tsy namaly ny fangatahako izy. Mila miova kely amin'izany toe-javatra izany aho. Koa, raha toa ny lehilahy ka afaka ny hanao sipa, nahoana ny vehivavy no tsia ?”
Kanefa, araky ny nambaran'i Mr A, mpampiasa iray ao amin'ilay vohikala Ashley Madison, “Maro amin'ireo vehivavy mpikambana ato no mitady takalo ara-bola fa tsy tena fifandraisana matotra, ka sarotra noho izany ny mitady olona matotra ao.”
Lee Wai Yee, mpampianatra mpikaroka momba ny miralenta ao amin'ny Oniversite Sinoa ao Hong Kong, mpiresaka sy mpahay momba ny resaka firaisana, dia nanamafy fa na dia efa ela aza no nisy ny fitadiavana olona hiarahana tety anaty aterneto, nisarika tampoka teo ny sain'ny haino aman-jery rehetra izany noho ny fiakaran'ny isan'ireo vehivavy te-hiodina, zavatra mahamenatra tokoa raha eo amin'ny fiarahamonina.
Notsipihan'i Lee ihany koa fa zava-pady tokoa izany resaka firaisana izany tany amin'ny taona 1970 tany, kanefa tato anatin'ny folo taona, noho ny fisian'ireo seha-pifandraisana manokana ety anaty aterneto, dia maro ireo vehivavy no nanomboka nitantara ny niainany ny firaisana ara-nofo tamin'ny manodidina azy, ary nifarana hatreto ny maha-mihoatra ny fefy ireo lohahevitra mifandraika amin'ny firaisana ara-nofo. Nanome sehatra ahafahan'ny vehivavy maneho ny fiàny ara-nofo manokana izany fiovana nisy izany […]
Taraiky any aoriana ny filazam-baovao mahazatra raha vao resaka kolontsain'ny firaisana ara-nofo. Mbola manohy mitatitra ny resaka firaisana ara-nofo sy ny filàna amin'ny endriny ratsy hatrany izy ireo. Sokajian'ireo famphalalam-baovao ho mpivarotena ireo vehivavy tafiditra amin'ireny sehatra ireny, raha toa ka efa mahazatra kosa ho an'ny lehilahy ny fampirafesana. Koa rehefa ny vehivavy ve no mandray anjara mavitrika amin'ny resaka firaisana dia mahita izay mamorona savoritaka ara-moraly ny filazam-baovao mahazatra, fa hoe loza mitatao ho an'ny fiarahamonina sy ny lehilahy ny fitomboan'ny isan'ireo vehivavy mitady olona hiarahana ety anaty aterneto.
Ny tena marina, raha tokony antsoina hoe vohikala fampihaonan'olon-droa ny Ashley Madison, ny filazam-baovao ao an-toerana kosa niantso  azy hoe “vohikalan'ny fijangajangana “. Tamin'ny andro nisokafany voalohany, nahitàna lehilahy 14.000 sy vehivavy 7.500 nanoratra anarana tao. Noho ny habetsahan'ny isan'ny lehilahy ao amin'io vohikala io mitaha amin'ny vehivavy, sarotra noho izany ny hanohana ilay resaka mandeha hoe ny fisiany dia handrisika ireo vehivavy hampirafy, ary dia nampian'ireo gazety an'ilay resaka fiakarana 20 isan-jaton'ny isan'ireo lehilahy mangataka soso-kevitra amin'ny tokony hataony noho ny fiarahan'ny vadin'izy ireo amin'olon-kafa ivelan'ny tokantrano ihany koa izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/11/30/54039/
 no namoahana: http://www.inmediahk.net/node/1018689
 an'i Wechat: http://www.wechat.com/zh_TW/